Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Thailand kpuru ìsì na COVID-19 Surge: Pushes Phuket Sandbox
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ego Phuket Sandbox dị mkpa karịa ahụike
N'agbanyeghị mmụba nke ikpe COVID-19 na Thailand niile, ọnụ na-ekwuru Center for Economic Situation Administration (CESA), Thanakorn Wangboonkongchana, kwuru taa na mkpọsa Phuket Sandbox ga-aga n'ihu na mgbanwe mgbe niile emere iji dozie nsogbu.
Phuket rere 335,000 ụlọ nkwari akụ abalị maka oge July-Septemba n'okpuru mkpọsa Sandbox.
Mkpokọta ego ha nwetara bụ ijeri baht 8.9 (US $ 265.9) n'ime oge ọnwa atọ a.
Phuket Sandbox kemgbe ọ malitere amalitelarị ihe dị ka ijeri baht (US $ 1 nde).
Arụmụka a bụ na mkpọsa dị ugbu a enyerela aka mepụta ọrụ, ebe a na -akwadebe ihe nkiri maka oge njem nlegharị anya kacha elu na njedebe nke afọ. Gọọmentị na -akpọ nsonaazụ nke mkpọsa Phuket Sandbox dị mma, na -aga n'ihu imeghe obodo ahụ maka ndị njem nleta ọgwụ mgbochi, malite na mpaghara agwaetiti Phuket.
Wangboonkongchana kwuru na gọọmentị na-atụ anya na mkpọsa a ga-ahụ ọrụ na-abawanye na Ọgọstụ na Septemba, ebe ebumnobi ndị ọbịa ga-abụ mmadụ 100,000 n'ọnwa Julaị-Septemba, yana ngụkọta ego ha ga-enweta 8.9 ijeri baht ($ 265.9 nde) n'otu oge. Ọ kpọrọ oku ka ndị obodo ime obodo bụrụ ndị ọbịa nke ọma, na -enye ha ezi echiche mgbe ha na -ahụ nchekwa ha.
Mgbasa njem nlegharị anya njem nlegharị anya nke Thailand Akara akpụkpọ ụkwụ Phuket ewepụtala ihe ruru ijeri 1 baht (US $ 29.9 nde) na usoro mmefu ego kemgbe ọ mepere n'ọnwa gara aga wee nabata ihe ruru ndị mbata mba ụwa 17,000, ebe edeela ngụkọta ọnụ ụlọ nkwari akụ 335,000 maka oge July-Septemba.